February 5, 2020 - MM Live News
အသက် ၃၀ အရွယ်ဆိုတာ အရမ်းတော့ မကြီးသေး ပေမယ့် အရမ်းလည်း မငယ်တော့ ပါဘူး။ ဘဝမှာ အတွေ့အကြုံတချို့ကို ဒီအရွယ်မှာ ဖြတ်သန်းပြီး သင့်နေပြီ ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ရင်ဆိုင် ရမယ့် အရာတွေကို တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အားအတန် အသင့်မွေးထား ဖို့လိုတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ် ပါတယ်။ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ အခုဖော်ပြမယ့် အတွေ့အကြုံနဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော် …… (၁) တစ်ယောက်တည်း လည်းနေတတ် ဖို့လိုတယ် ” အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ တချို့က အိမ်ထောင်ပြုကြ ပြီးသား ဖြစ်နေတတ်သလို၊ တချို့ကျတော့ ချစ်သူရှိပေမယ့် အိမ်ထောင်မပြုရသေးတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ […]
ဘုရားဖူးကား တိမျးမှောကျ…လူ (၅)ဦးခနျ့သဆေုံးဟု ( ကနဦးသိရ )
ဘုရားဖူးကား တိမ်းမှောက်။ လူ (၅)ဦးခန့်သေဆုံးဟု ( ကနဦးသိရ ) ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မိုင်းတုံးတာကြီး ကျေးရွာအနီးတွင် ဇလုံတောင်မှ ဘုရားဖူးပြီးပြန်လာသော မော်ဟိုင်းကျေးရွာမှ ဘုရားဖူးယာဉ်တစ်စီးသည် …. ဒီကနေ့ ညနေ ၅:၃၀ နာရီခန့်က တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် လူ ၅ ဦးခန့် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရပြီး ကျန်ရှိလူနာများအား မန်စီလေး တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေကြောင်း ကနဦး သတင်းသိရသည် ။ မိသားစုဝင်များသိရန် ရှယ်ပြီးဖြန့်ဝေပေးကြပါ……။သတင်းဆက်​ရန်​ >>>>မြင့်လွင် unicode ဘုရားဖူးကား တိမျးမှောကျ။ လူ (၅)ဦးခနျ့သဆေုံးဟု ( ကနဦးသိရ ) ပငျလညျဘူးမွို့နယျ မိုငျးတုံးတာကွီး ကြေးရှာအနီးတှငျ ဇလုံတောငျမှ ဘုရားဖူးပွီးပွနျလာသော မျောဟိုငျးကြေးရှာမှ ဘုရားဖူးယာဉျတဈစီးသညျ …. ဒီကနေ့ ညနေ […]
”ဆေးရုံမှာလူနာကွညျ့ မလာပါနဲ့ ”….ဆေးရုံမှာ လူနာကွညျ့သှားတဲ့အခါ သိထားစရာအခကျြမြား…
နောက်ဆုံး ထွက်သက်ကို ပင်ပမ်း ကြီးစွာ ဖြတ်ကျော် ရမယ့် နေရက်တွေ ၊ အချိန်တွေ ရောက် လာတဲ့အခါ ကျေးဇူး ပြုပြီး လူနာ ကြည့် ၊ လူနာအားပေး မလာပါနဲ့တော့…. စကားပြော ဖို့ကိုပင် မနည်းအားယူနေရမယ့် အချိန်မှာ နေကောင်းလား သက်သာလား ဆိုတဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေ မဖြေချင်တော့ပါ ရမွှေး ဆွတ်ပြီး ငါ့အနား လာမရပ်ပါနဲ့ ( အမွှေးနံ့၊ ချွေးနံ့၊ ဟင်းနံ့တွေ ကိုတောင် မခံနိူင်တော့တာကို သတိပြု မိပါစေ ) ဝတ္တရားအရ….. ဝတ္တရားအရ လူနာ မေးလာရင်း ဆယ်လ်ဖီ လာမဆွဲပါနှင့် ထွက်ခွာ ရတော့မယ့် ငါ့ကိုဘေးနားထားပြီး သင်ပျော်ပြ မနေပါနှင့် ငါ့ကို ချစ်ရင် အားနာပါ သံဝေဂ […]
သံဖွူဇရပျမွို့တှငျ ဗဒေငျဆရာဆိုသူက ၇ တနျး ကြောငျးသူ(၃)ဦးကို တညျးခိုခနျးသို့ အလှညျ့ကခြျေါယူပွီး ယတွာခတြေဲ့ဖွဈရပျ
ဒီမုဒိန်းမှုကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဖတ်ပြီးရင် ဘယ်လိုပြောချင်လဲ မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်မှုဖြစ်ပွား ရောင်းဒေါင်းကျေးရွာ အရှေ့ပိုင်းမှာနေတဲ့ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိ သီဟအောင်ဆိုသူ ဗေဒင်ဆရာက သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်နေတဲ့ အပျိုကြီး ဒေါ်အေးမြင့် (၃၈)နှစ်ကို ကံနိမ့်နေလို့ ယတြာချေရမယ်လို့ပြောတယ်…. ယတြာက အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို သူ့ထံသို့ (၇)ပတ် တိုင်တိုင် ခေါ်လာပေးရမယ်လို့ဆိုပြီး သူ့ရည်းစားအပျိုကြီး ခေါ်လာပေးတဲ့ ကလေးမလေးတွေကို တည်းခိုခန်းကိုခေါ်ပြီး မုဒိန်းကျင့်တာပါ။ သူ့ရည်းစား ဗေဒင်ဆရာရဲ့ စေခိုင်းချက်အရ ယတြာချေဖို့ ဒေါ်အေးမြင့် က ပထမဆုံး သူမရဲ့တူမ ဖြစ်သူ အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ် ကလေးမ ကို စည်းရုံးပြီး မုဒုံမြို့ …….. တည်းခိုခန်း အခန်းနံပါတ်(၃)ကို […]
သောကွာသားသ်မီးမြား ဘဝတဈသကျတာ အန်တရာယျကငျး၍ လာဘျရှငျရနျအတှကျ အကောငျးဆုံးယတွာ…
သောကြာသားသ္မီး များအတွက်​ အန္တရာယ်​ကင်း၍ လာဘ်​ရွှင်​ရန်​အတွက်​ ဒန်းညွှန့်​ ၊ ​ဒေါနပန်း နှင့်​ ခ​ရေညွှန့်​ကို ဘုရား​ ပန်းအိုးတွင်​၄င်း ၊ တံခါး​ပေါက်​တွင်​၄င်း ၊ ထိုးပါ ။ ( ၇ )ရက်​ ၁ကြိမ်​ ​ရေလဲ ပေးပါ ။ အိမ်​ ၏ အ​ရှေ့အရပ်​တွင်​ သရက်​ပင်​ကို စိုက်​ထားပါ ။ စိုက်​ရမည့်​ နည်းမှာ…. တွင်းကို တစ်​​ထောင့်​ထွာခန့်​ တူးပြီး ​မြေကြီးထဲတွင်​ ​ကျောက်​​ရောင်​စုံ မျိုးစုံ ( ၇ )မျိုး ၊ ဆန်​တစ်​ဆုပ်​ ၊ ​မြေဇာမြက်​ တစ်​ဆုပ်​ ၊ ​ကြေးနီပိုက်​ဆံ တစ်​ပြား ၊ သံ​ချောင်း တစ်​​ချောင်းကိုရော၍ ထည့်​ပြီးလျှင်​ သစ်​ပင်​ကို ​ရွှေရည်​ ​ငွေရည်​ […]
အိမျတှငျးအပူတှငွေိမျးပွီး လာဘျလာဘပှငျ့လနျးစရေနျ အကောငျးဆုံးပွုလုပျရမညျ့ ယတွာလကျဆောငျ
အိမ်တွင်းအပူတွေငြိမ်းပြီး လာဘ်လာဘပွင့်လန်းစေရန် အိမ်တွင်းအပူတွေငြိမ်းပြီး လာဘ်လာဘပွင့်လန်းစေရန် လင်မယား မကြာခဏ စကားများ ရန်ဖြစ်ခြင်းဘေးမှကင်းဝေးစေရန် အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရမည့် ယတြာလေးလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ယတြာနည်းလမ်းလေးကတော့ လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါတယ် ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေရမှာကတော့ သံပရာသီးအဝါရောင်တစ်လုံး နဲ့ လေးညှင်းပွင့် ခုနှစ်ပွင့်ကို မဖြစ်မနေရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကတော့ သံပုရာသီးအဝါတစ်လုံးအား အလယ်တည့်တည့်မှ ထက်ခြမ်းခွဲပြီး သံပုရာသီး အသားထဲသို့ ရှာဖွေထားသောလေညှင်းပွင့် ခုနှစ်ပွင့်စီကို စနစ်တကျ စိုက်သွင်းကာ အိမ်အဝင်ပေါက် တံခါး ဘေးတဖက်တချက် ထားပြီး သောကြာနေ့မနက်ပိုင်း ပြုလုပ်ပါ … ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီး တပါတ်လောက်ကြာမြင့်ပြီး သောကြာနေ့တွင် သင့်ရာနေရာ၌ စွန့်ကာ အသစ်ထပ်မံနောက်၁ကြိမ် ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သုံးကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပြီးပါက သင့်တို့ထံတွင်ရှိနေသော အညံ့များ သိသိသာသာ ပြေလျော့သွားသည်ကို အံ့သြဖွယ်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ကျနော်ပြောသော ယတြာနည်းလမ်းလေးကို သင့်ဆွေမျိုးများအား ပြန်လည်မျှဝေကုသိုလ်ပြုလိုက်ကြပါ….။ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေ…..။(လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်) […]
အခြိနျ၆ လအ တှငျး ပိုကျဆံစုပွီး ကိုယျပိုငျအိမျဝယျနိုငျသှားခဲ့တဲ့ နညျလမျးကို ပွောပွလာတဲ့ အသကျ ၂၀ စုံတှဲ…
ယနေ့ ခေတ်မှာ အိမ်မပြောနဲ့ မြေတောင်မပိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ…တိုက်ခန်းဆိုတာကလည်း တော်ရုံအခြေခံလူတန်းစားတွေ လက်လှမ်းမီတာ မဟုတ်ပါဘူး… အိမ်ခြံမြေဆိုတာကလည်း တကယ့်ကို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်မှ ဝယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်… ခုဖော်ပြမဲ့ စုံတွဲကတော့ မိဘတွေထောက်ပံ့မှုလုံးဝမပါဘဲ စုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့ ၆ လအတွင်း အိမ်ဝယ်နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါ တယ်…. အ သက်၂၀ အရွယ် Joshua Shaw ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ Wiktoria Zaucha ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတို့ စုံတွဲဟာ ၆ လအတွင်း ပေါင် ၁၃၀၀၀ (မြန်မာငွေ သိန်း၂၅၀ကျော်) တန်ဖိုးရှိတဲ့ ၃ ထပ်အိမ်လေးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်….. သူတို့စုံတွဲဟာ အိမ်မဝယ်နိုင်သေးခင် မိဘတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ….Joshua Shaw ကတော့ သာမန်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Wiktoria Zaucha ကတော့ […]
မွငျးခွံ GTIကြောငျး IT ဒုတိယနှဈတကျနသေော ကြောငျသား ဖုနျးအလုခံရသညျ့အပွငျ လေးခှနှငျ့အနီးကပျအပဈခံရပါသဖွငျ့ ညာဘတျမကျြလုံးစိုးရိမျစှာဒဏျရာရရှိသှား
February 5, 2020 February 5, 2020 MM Live News
5.2.2020 ယနေ့မနက်ပိုင်း(၁၀)နာရီခန့် လယ်ဝေးမြို့မှ မြင်းခြံ GTIကျောင်း IT ဒုတိယနှစ်တက်နေသော မောင်ဉာဏ်မင်းထွန်းသည် ဖုန်းအလုခံရသိအပြင်လေးခွနှင့်အနီးကပ်အပစ်ခံရပါသဖြင့် ညာဘတ်မျက်လုံးစိုးရိမ်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားပါသဖြင့် မန္တလေးမျက်စိ ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ပို့ဆောင် ပေးရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ…..GTI ကျောင်းမြောက်ဘတ် သာပေါင်းကျေးရွာအနီးရှိဇီးပင် အောက်ထိုင်နေစဉ်လူငယ်(၃)ဦးမှာရောက်ရှိလာပြီး လေးခွနှင့်ချိန်ရွယ်ပြီးဖုန်းတောင်းပါသဖြင့် ပေးလိုက်သော်လည်း လေးခွနှင့်ပစ် သွားပါသဖြင့်ညာဘတ်မျက်စိမှာ စိုးရိမ်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ GTI ကျောင်းမှမော်ကွန်းထိန်း ITဌာနမှူးနှင့်ဆရာမများကျောင်းသား/သူများလိုက်လာကြပြီး လိုအပ်သည်များဆောင်ရွတ်ပေးနေကြပါသည်။မန္တလေးမျက်စိဆေးရုံကြီးသို့ ဆက်လက်ဆေးကုသရန်သွားရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဧရာဝတီသွေးလှူရှင်အသင်းမှ မေတ္တာဖြင့်အခမဲ့ကူညီပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါသည်။ မိဘများထံအကြောင်းထား၍မန္တလေးမျက်စိဆေးရုံလိုက်လာနေကြပါသည်။ ယာဉ်မောင်း…ကျော်ကျော်ထိုက် ယာဉ်အကူ…..သတင်းသမားလေး…ဦးကိုနီ / U KoNi / Htin Aung Lin unicode 5.2.2020 ယနမေ့နကျပိုငျး(၁၀)နာရီခနျ့ လယျဝေးမွို့မှ မွငျးခွံ GTIကြောငျး IT ဒုတိယနှဈတကျနသေော မောငျဉာဏျမငျးထှနျးသညျ ဖုနျးအလုခံရသိအပွငျလေးခှနှငျ့အနီးကပျအပဈခံရပါသဖွငျ့ ညာဘတျမကျြလုံးစိုးရိမျစှာဒဏျရာရရှိသှားပါသဖွငျ့ မန်တလေးမကျြစိ ဆေးရုံကွီးအရေးပျေါပို့ဆောငျ ပေးရပါသညျ။ ဖွဈစဉျမှာ…..GTI ကြောငျးမွောကျဘတျ […]
အင်ျဂါသားသ်မီး မြားအတှကျ ဘဝတဈသကျတာ ယတွာ….
အင်္ဂါသားသ္မီး များအတွက်​ ဘဝတစ်​သက်​တာ ယတြာ အန္တရာယ်​ကင်း၍ လာဘ်​ရွှင်​ရန်​အတွက်​ ​ခ​ရေညွှန့်​ နှင့်​ ​သ​ပြေညွှန့်​ တို့ကို ဘုရား​ပန်းအိုး တွင်​ ၄င်း တံခါး​ပေါက်​ တွင်​ ၄င်း ထိုးပါ ( ၇ )ရက်​ ၁ကြိမ်​ ​ရေလဲ ​ပေးပါ ။ အိမ်​ ၏ ​တောင်​ အရပ်​ တွင်​ နှင်းဆီပင်​ကို စိုက်​ထားပါ၊ စိုက်​ရမည့်​ နည်းမှာ တွင်း ကို တစ်​​ထောင့်​ထွာ ခန့်​ တူးပြီး ​မြေကြီးထဲ တွင်​ ​ကျောက်​​ရောင်​စုံ မျိုးစုံ ( ၇ )မျိုး ဆန်​တစ်​ဆုပ်​ ​မြေဇာမြက်​ တစ်​ဆုပ်​ ​ကြေးနီပိုက်​ဆံ တစ်​ပြား သံ​ချောင်းတစ်​​ချောင်းကို ​ရော၍ ထည့်​ပြီးလျှင်​ သစ်​ပင်​ ကို […]